1 Madzimambo 14:1-31
14 Panguva iyoyo chaiyo Abhija mwanakomana waJerobhoamu akarwara.+ 2 Naizvozvo Jerobhoamu akati kumudzimai wake: “Ndapota, simuka uchinje nguo+ dzako kuti varege kuziva kuti ndiwe mudzimai waJerobhoamu, uende kuShiro. Tarira! Ikoko ndiko kune muprofita Ahija.+ Ndiye akataura nezvokuva kwangu mambo wevanhu ava.+ 3 Enda wakabata zvingwa+ gumi nemakeke akasaswa, nedende+ rouchi, unopinda maari.+ Iye ndiye achakuudza zvichaitika kumukomana uyu.”+ 4 Mudzimai waJerobhoamu akaita saizvozvo. Naizvozvo akasimuka, akaenda kuShiro,+ akasvika kuimba yaAhija. Zvino Ahija akanga asingakwanisi kuona, nokuti maziso ake akanga ava norutara nokuda kwezera rake.+ 5 Jehovha akanga ati kuna Ahija: “Tarira mudzimai waJerobhoamu ari kuuya kuzobvunza shoko kwauri pamusoro pomwanakomana wake; nokuti ari kurwara. Utaure naye seizvi nezvozvo. Paanongosvika, achange achiita kuti arege kuzivikanwa.”+ 6 Ahija paakangonzwa mutsindo wetsoka dzake sezvaakanga achipinda pasuo, akati: “Pinda, iwe mudzimai waJerobhoamu.+ Uri kuzviitirei kuti usazivikanwa zvandiri kutumwa kwauri neshoko rinorwadza? 7 Enda unoti kuna Jerobhoamu, ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Zvandakakusimudza pakati pevanhu vako, kuti ndikuite mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri,+ 8 ndikabvarura+ umambo huchibva kuimba yaDhavhidhi, ndikakupa, asi iwe hauna kuita somushumiri wangu Dhavhidhi, akachengeta mirayiro yangu, akanditevera nomwoyo wake wose nokuita zvakarurama chete pamberi pangu,+ 9 asi wakaita zvakaipa kupfuura vose vaya vakakutangira, ukazvigadzirira mumwe mwari+ nemifananidzo yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa+ kuti undigumbure,+ uye ini ndini wawakarasira shure kwako;+ 10 nokuda kwaizvozvo ndichaunza dambudziko paimba yaJerobhoamu, ndichaparadza kuna Jerobhoamu vanhurume vose,+ asina mubatsiri neasina zvaanobatsira pakati paIsraeri;+ chokwadi ndichatsvaira ndochenesa seri kweimba yaJerobhoamu,+ sezvinoita munhu anotsvaira ndove kusvikira yabviswa yose.+ 11 Imbwa dzichadya+ weimba yaJerobhoamu anofira muguta; uye shiri dzokumatenga dzichadya+ uya anofira kusango, nokuti Jehovha azvitaura.”’ 12 “Zvino iwe, simuka, enda kumba kwako. Tsoka dzako padzinotsika muguta, mwana wacho achafa. 13 VaIsraeri vose vachamuchema,+ vomuviga, nokuti uyu chete pane vaJerobhoamu ndiye achaiswa muguva; nokuti chimwe chinhu chakanaka kuna Jehovha Mwari waIsraeri chawanikwa maari muimba yaJerobhoamu.+ 14 Jehovha achazvimutsira mambo+ waIsraeri achaparadza imba yaJerobhoamu pazuva rakataurwa, uye zvakadini kana zvikaitwa iko zvino?+ 15 Jehovha acharova Israeri, sokuvheya kunoita tsanga mumvura;+ uye achadzura+ vaIsraeri panyika ino yakanaka+ yaakapa madzitateguru avo, uye chokwadi achavaparadzira+ mhiri kwoRwizi,+ nokuti vakagadzira matanda avo matsvene,+ vakagumbura+ Jehovha. 16 Achasiya+ Israeri nokuda kwezvivi zvaJerobhoamu zvaakaita uye zvaakatadzisa Israeri nazvo.”+ 17 Mudzimai waJerobhoamu akabva asimuka, akaenda, akasvika kuTiza.+ Zvaakanga achisvika pachikumbaridzo cheimba, mukomana wacho akafa. 18 Naizvozvo vakamuviga, vaIsraeri vose vakamuchema, maererano neshoko raJehovha raakanga ataura achishandisa mushumiri wake muprofita Ahija. 19 Mamwe mabasa ose aJerobhoamu, kurwa+ kwaakaita nokutonga kwaakaita, zvakanyorwa mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri. 20 Mazuva akatonga Jerobhoamu aiva makore makumi maviri nemaviri, achibva azorara nemadzitateguru ake;+ uye mwanakomana wake Nadhabhi+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 21 Zvino Rehobhoamu+ mwanakomana waSoromoni, akanga ava mambo muJudha. Rehobhoamu aiva nemakore makumi mana nerimwe chete paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nemanomwe ari muJerusarema, guta+ rakanga rasarudzwa naJehovha pamadzinza+ ose aIsraeri kuti aise zita rake ipapo.+ Amai vake vainzi Naama mukadzi muAmoni.+ 22 VaJudha vakaita zvakaipa pamberi paJehovha,+ zvokuti vakamuita+ kuti ave negodo kupfuura zvose zvakanga zvaitwa nemadzitateguru avo nezvivi zvavo zvavakaita.+ 23 Ivowo vakaramba vachizvivakira nzvimbo dzakakwirira+ neshongwe tsvene+ nematanda matsvene+ pazvikomo+ zvose nepasi pemiti yose yakasvibirira.+ 24 Kunyange pfambi dzechirume dzepatemberi dzaiva munyika yacho.+ Vakaita maererano nezvinhu zvose zvinosemesa zvemarudzi akanga adzingwa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.+ 25 Mugore rechishanu raMambo Rehobhoamu, Shishaki+ mambo weIjipiti akauya kuzorwisa Jerusarema. 26 Akatora pfuma yeimba yaJehovha nepfuma yeimba yamambo;+ uye akatora zvose.+ Akatora nhoo dzose dzendarama dzakanga dzagadzirwa naSoromoni.+ 27 Naizvozvo Mambo Rehobhoamu akadzitsiva nenhoo dzemhangura dzaakagadzira, akaita kuti dzitarisirwe nevakuru vevamhanyi,+ varindi vesuo reimba yamambo.+ 28 Kazhinji mambo paaiuya kuimba yaJehovha, vamhanyi vaidzitakura, uye vaidzidzorera kuimba yevarindi yevamhanyi.+ 29 Mamwe mabasa ose aRehobhoamu nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa enguva yemadzimambo aJudha? 30 Hondo yakavapo nguva dzose pakati paRehobhoamu naJerobhoamu.+ 31 Rehobhoamu akazorara nemadzitateguru ake, akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi.+ Amai vake vainzi Naama mukadzi muAmoni.+ Uye mwanakomana wake Abhijamu+ akatanga kutonga panzvimbo pake.